I-Ultrasonically Emulsified Cremes Nemikhiqizo Yezimonyo - Hielscher Ultrasound Technology
Imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba efana ne-cremes, i-lotion, ama-moisturizer, ama-balms kanye namafutha okugcoba ngokuvamile asuselwa ku-submicron- enhle nase-nano-sized emulsions. I-Ultrasonic emulsization yakha amabutho aphezulu e-shear futhi isungulwe kahle njengendlela enamandla nethembekile yokuhlanganisa ukunakekelwa kwesikhumba nemikhiqizo yezimonyo.
I-Ultrasonic SubMicron- & I-Nano-Sized Emulsions ku-Izimonyo
I-Ultrasonic emulsation iyindlela esetshenzisiwe yokukhiqiza i-submicron- ne-nano-emulsions yokunakekelwa kwesikhumba nemikhiqizo yezimonyo. I-frequency ephansi, i-sonication ephezulu kakhulu yiyona ndlela ephakeme yokuqamba, engabeka kalula indawo ye-homogenizer ephezulu ye-high-pressure noma i-high-shear mixer. Lapho uketshezi noma ama-slurries abonakaliswa yi-high-Power ultrasonics, kukhiqizwa amabutho amakhulu e-shear, anikezela ngamandla adingekayo ukukhiqiza uzinzo noma u-translucent noma osobala we-submicron- noma ama-nanoemulsions. I-acoustic (ultrasonic) cavitation yakha ngobudlova futhi ifaka i-vacuum vacuum enobudlova, okugcina kuphumela ezimeni ezibucayi zasendaweni njengokucindezela okukhulu kakhulu nomehluko wokushisa kanye namajethi ka-liquid. Lezi zimo ezedlulele ziphazamisa amaconsi futhi zisakaze futhi ziphule izinhlayiya eziqinile kwisilinganiso se-submicron- / nanometer. I-submicron- ne-nano-sized emulsions inenzuzo yokuthi amaconsi emizuzu anikeze indawo ephezulu kakhulu yendawo, ethuthukisa ukungena kwesikhumba kanye nokulethwa kwezinto ezi-bioactive ezingxenyeni zesikhumba. Ngaphezu kwalokho, ama-nanoemulsions azinza uma eqhathaniswa ne-macro-emulsions futhi angakhombisi ukugcotshwa, ukucwilisa, ukuqubuka, noma ukubumbana, okubonakala kanye nama-macroemulsions.
Ngama-ultrasonicators, izinqubo ze-emulsification zingavivinywa kalula ngezinga elincane bese zilinganiswa ngomshini kufinyelela ezingeni lokukhiqiza. Lokhu kusiza ukuthuthukiswa kokwakhiwa okusha noma ukwenziwa kwemikhiqizo ekhona.
Landela lesi sixhumanisi ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-emulsion ye-surringant-free Pickering elungiselelwe nge-sonication!
I-UIP1000hdT nge-reaction flow yengilazi yokwenziwa kwemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba njengokhilimu, ama-lotion namafutha
Izinzuzo ze-Ultrasonic cosmetic Nanoemulsions
Khuphula izinga lokufaka
Yehlise ukuguquguquka kokumunca
Ukuphuculwa kwe-bioavailability kwama-molecule we-lipophilic
Ukuvikelwa kwe-oxidation ne-hydrolysis
I-Ultrasonic Emulsification kawoyela emanzini nge-ultrasonicator UP200Ht (200W)
Ukusakazeka kwe-Ultrasonic kwama-Molecule E-Bioactive
Ngokuvamile, imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba eyindathane iyacetshiswa ngezithako ezisebenzayo njengama-antioxidants, amavithamini kanye namanye ama-molecule we-bioactive, ondla isikhumba noma afeze imisebenzi ethile yesikhumba. Izinto ezisetshenziselwa ukusetshenziswa kwe-bioactive ejwayelekile zifaka phakathi amavithamini anjengevithamini C no-Vitamin E, CoQ10, reveratrol, i-Ferulic acid, i-hyaluronic acid kanye nama-peptide ahlukahlukene kanye nama-lipids. Ukuqinisekisa uhlelo lokusebenza ngisho nokulethwa okulawulwayo kwezithako zokugcoba, ama-biioacuse kufanele ahlakazeke homogencwelely kanye nokusatshalaliswa okufanayo ngomkhiqizo wokunakekelwa kwesikhumba. Ama-homogenizer e-Ultrasonic asabalalisa izinhlayiya eziqinile ngokulinganayo nangosayizi ofanayo wezinhlayiyana ekwakhiweni kokunakekelwa kwesikhumba. Ngaleyo ndlela, ukuxubeka kwe-ultrasonic nokusabalalisa akubangeli nje kuphela ukuthungwa okungumbala obushelelezi, kepha futhi kuvikela ama-molecule e-bioactive ngokumelene ne-oxidation kanye ne-hydrolysis kusukela lapho izinto ze-bioactive zifakwe esigabeni samafutha se-nanoemulsion ye-O / W futhi azivezi emanzini futhi umoya.
Ngokuya ekwakhiweni (ama-emulsion wamanzi-noma i-uwoyela-emanzini-imulsion), ama-molecule we-lipophilic ne-hydrophilic bioactive azuza ekwakhiweni kube ngama-nanoemulsions noma ama-liposomes, ngokulandelana.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana nokukhiqizwa kwe-ultrasonic kwama-nano-liposomes, sicela uchofoze lapha!
Izinzuzo ze-Ultrasonic Blending
Usayizi we-Submicron- / nano-size
Izingxube eziphezulu ze-Ultrasonic eziSebenzayo ze-cosmetic
Ukwenziwa kwemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba efana ne-cremes, i-lotion, i-moisturisers, ama-balms, amafutha okugcoba, amasaladi kanye nemikhiqizo yesikhumba yezinhlelo zokusebenza ezisetshenziselwa izinto ezihamba phambili / transdermal kudinga ubuchwepheshe bokuxubha obunokwethenjelwa nobunamandla ukuvikela ukuhlukaniswa kwesigaba, ukhilimu kanye nokuntanta kwezithako emkhiqizweni wokunakekelwa kwesikhumba. Ama-homogenizer e-Ultrasonic adala amandla amakhulu wokuxuba izingulube ophazamisa amaconsi ukuba anciphise i-submicron- / nano-size futhi asabalalise futhi izinhlayiya ze-deagglomerates zibe yinhlanganisela eyodwa. Ukuhlanganiswa okungafani kwe-submicron- / nano-sized kunikeza ukwakheka okuzinzile okuhlala isikhathi eside ngokungena okujulile kwesikhumba, izinga lokufakwa okuphezulu kanye nokulethwa kwama-mocule we-bioactive.
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngama-homogenizer e-ultrasonics kubakhiqizi bezokunakekelwa kwesikhumba nemikhiqizo yezimonyo emhlabeni wonke. Ukulawulwa okuqondile kwawo wonke ama-parameter inqubo afakiwe njenge-amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa kanye nesikhathi se-sonication kwenza inqubo ye-ultrasonic ithembeke futhi ifinyeleleke kabusha. I-Hielscher Ultrasonics iyazi ngokubaluleka kwekhwalithi ephezulu yomkhiqizo futhi isekela abakhiqizi bezimonyo ukusebenzisa inqubo yokuma kanye ne-GMP (Izenzo Ezinhle Zokukhiqiza) njengoba wonke ama-homogenizer ethu e-digital ultrasonic aqopha ngokuzenzakalelayo yonke imingcele yenqubo ye-ultrasonic ekhadini le-SD-elakhelwe. Lokhu kusiza ukuqapha kwenqubo kanye nokulawulwa kwekhwalithi kakhulu.
Onke ama-ultrasonicators ama-Hielscher ayakhelwe ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi komthwalo ophelele futhi ngamahhashi omsebenzi athembekile ekukhiqizeni.
Ama-Ultrasonicators we-Industrial size
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics 'luhlanganisa isibonisi esigcwele kusuka kuma-compact lab ultrasonicators kuya kuma-bench-top nezinhlelo zezimboni ezigcwele zezimboni. Ngenkathi izinqubo ze-sonication zingaqhutshwa ngemodi ye-batch ne-inline, ngoba inani elikhulu kwelezimboni i-sonication eqhubekayo isebenzisa ukusetha kokugeleza iyanconywa ngenxa yokulawulwa kwe-sonication engafani neyodwa nenqubo yokulawula inqubo. Izinhlobonhlobo ezibanzi zezesekeli ezifana ne-sonotrodes (eyaziwa nangokuthi ama-probes, izimpondo noma amathiphu), izimpondo ze-booster (ezisebenza njengokuqina noma ukuncipha), ukugeleza kweseli okugelezayo nokunye okokungezelela kuvumela ukuhlanganisa ukucushwa okuhle kwenqubo yakho.
Ukuqina, ukuthembeka kanye nokugcinwa okuphansi kunezinzuzo ezengeziwe ze-Hielscher ultrasonicators. Zonke izinhlelo ze-Hielscher zezimboni ze-Hielscher zenzelwe ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwa kakhulu.
Mayelana ne-Emulsions in Products Cosmetic
I-emulsion uhlelo lwezigaba ezimbili. Izakhi eziyinhloko ziyisigaba samafutha nesigaba esinamanzi. Isigaba samanzi singamanzi kanye nenye inhlanganisela yezinto zokwenziwa ezinobumba futhi zincibilike, okungenani ngezinga elithile, emanzini. Isigaba samafutha siqukethe imishini eyodwa noma ngaphezulu yamafutha, noma ezinye izithako ezingezona ezolayini futhi zibonisa okungenani ukuncibilika kwezinye izinto ezinamafutha. Amafutha-emanzini (o / w): Amaconsi kawoyela ahlakazeka emanzini; uwoyela kubhekiselwa kuwo njengesigaba sangaphakathi noma esihlakazekile namanzi njengesigaba sangaphandle noma esiqhubekayo. Ama-emulsion wamanzi-ku-oyili (w / o): amaconsi amanzi ahlakazekile emafutheni; amanzi ayisigaba sangaphakathi noma esisakazekile futhi i-oyile yisigaba sangaphandle noma esiqhubekayo. w / o / w noma o / w / o okubizwa ngokuthi ama-emulsion ayinkimbinkimbi noma amaningi.